“Manomboka amin’ny foto-pahalalàna, inona ny fotokevitry ny feminisma” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Jona 2018 5:15 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Português, Ελληνικά, Italiano, English
Mpikambana ao amin'ny ekipan'ny fandaharan'ny onjam-peo isan-kerinandro La Movida Independiente” ao amin'ny Wambra Radio any Quito, Ekoadaoro i Stefy Muñoz. Dika an-tsoratra tamin'ny lahatsary momba ny fanadihadiana nataon'i Stefy momba ny zavon-teny manondro ny voambolana ” feminismo” (feminisima) ao anatin'ny tontolo Ekoadaoreana ity manaraka ity.
Ireo teny mibahan-toerana avy amin'ny lahatsoratra miisa 112 izay navoaka teo anelanelan'ny volana Janoary 2017 sy Aprily 2018 milaza ny hoe “feminismo” (feminisima) ao anatin'ny angona Media Cloud amin'ny seha-pampitam-baovao 2 amin'ny teny Espaniola ao Ekoadaoro. (jereo ny sary lehibe kokoa)
Nihevitra izahay fa maneho ny fomba fijery miiba ny zavon-teny momba ny “feminisma”, saingy rehefa nanao ny fikarohana momba ity teny ity izahay dia nahatsikaritra fa raha ny marina, misy lafiny maro miabo mifandraika amin'ny feminisma, toy ny “fitoviana” “zo”, “politika”, “tolona”, “hetsika”, sns. Raha ny marina, vitsy ny teny miiba.
Araka ny zavon-teny, ahoana ny fomba hanehoana ny “feminisma” ao amin'ny fampitam-baovao?
Tsy hita ao amin'ny fampitam-baovao ny tolona ara-tsosialy, ireo fikambanana, ireo vondrona, ireo vondrom-behivavy izay nitarika ity tolona ity. Izany hoe nijery tamin'ny fampiasa iray aho izay nampiseho ny vaovao miseho voalohany sy be mpitsidika indrindra, nisy teo amin'ny folo na dimy ambinifolo teo izy ireo, ary samy nojereko tsirairay avy izany saingy tsy nisy niresaka momba ny vondrona, na fikambanana, na vehivavy malaza; Tsy nahita na inona na inona momba ny feminisma aho.
Ahoana no tokony hanehoana ny feminisma amin'ny fampitam-baovao?
Zava-dehibe ny hanombohan'izany amin'ny foto-pahalalàna, amin'ny tsirikevitry ny feminisma, mba hahafahantsika manana fotokevitra iray ihany, tsy tahaka ny fikarohana mahazatra indrindra ao anatin'ny taona ao anaty rakibolana, na ny famaritana nomen'ny RAE ( Akademiam-panjakana Espaniola) fa tena mahaliana ny tena atao hoe feminisma, ny dikany, ny tanjony. Amin'izany heviny izany, mamela ny fikarohana teny maro eo no ho eo ny Media Cloud, ary mieritreritra aho fa nahita fampahafantarana vitsivitsy na teny mifanakaikikaiky kokoa amin'izay tena tadiaviko na eritreretiko ho hita .
Ao anatin'ny andiany Rising Frames izay nokarakaraina niaraka tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny fikambanana El Churo any Quito, Ekoadaoro ny lahatsoratra. Nokarakarain'izy ireo ny atrikasa tamin'ny 21 aprily 2018 ary namoriana solontena avy amin'ny fikambanana sy vondrona samihafa mba handinihana ny fomba hanehoana azy ireo na ny olana izay atrehany ao amin'ny angona media Ekoadaoreana sy ny famoronana tantara ho setrin'izany.
Nanatrika tamin'ny fandikana an-tsoratra sy ny fandikan-teny ny lahatsoratra i Mónica Bonilla sy Belén Febres-Cordero, izay nanao ny fanitsiana mba ho mazava tsara sy fohy kokoa.